သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုခွဲခြားရန်အကြံပြုချက်များ ၁၂ Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 22, 2015 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
စာဖတ်သူတွေကအရမ်းကိုဖန်တီးမှုသိပ်မရပေမယ့်စာဖတ်သူတွေကငါတို့နဲ့အတူရှိနေတာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ သတင်းအချက်အလက်များစွာကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ဝေမှုကိုအခြားသူများနှင့်ခွဲခြားရန်အထောက်အကူပြုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ ကျော်လွန်၍ ဝေးလွန်းလှသည်မဟုတ်။ ငါတို့ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် podcast အင်တာဗျူးများစီးရီး အားထုတ်မှုတစ်ခု
စာသားအကြောင်းအရာများကိုကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်လျစ်လျူရှုထားခြင်း၏အကြောင်းရင်းအများစုမှာထိရောက်သောရှုထောင့်မှသာဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကြောင်းအရာများစွာရေးသားရန်နှင့်အရင်းအမြစ်များမများရန်အကြောင်းအရာများစွာရှိသည်။ Oracle ကနေဒီအချက်အလက်တွေကကျွန်မကိုပိုပြီးတီထွင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်။ သတင်းအချက်အလက် 12 အံ့သြဖွယ်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြံပြုချက်များ (ဒါကဘလော့ဂ်မဟုတ်ပါ) သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကြံဥာဏ်တချို့ပေးထားတယ်။
စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း - သင်၏အကြောင်းအရာများကိုဉာဏ်စမ်းပဟေasိအဖြစ်ရေးပါ။
တွစ်တာ - အကြောင်းအရာများကိုတွစ်တာတွင်တုံးများဖြင့်ထုတ်ပြန်ပါ။
ဇယား - သင်၏အကြောင်းအရာကိုထူးခြားသောဇယားများဖြင့်ခွဲခြားပါ။
ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု - ဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်တစ်ခုကိုဝေမျှပါ။
ရုပ်ပြ Strip - သင့်အကြောင်းအရာကိုအလွယ်တကူဝေမျှနိုင်သောအစုအဝေးတစ်ခုအတွင်းရေးပါ။
စာသားမကို Message - SMS မှစစ်တမ်းတစ်ခုမေးပြီးရလဒ်များကိုမျှဝေပါ။
စီးရီး - ရှေးရှေးများပြန်လာနိုင်ရန် multi-part series တစ်ခုကိုရေးပါ။
Share - လိုမျိုးလူမှုရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှအကြောင်းအရာများကို curate and share လုပ်ပါ Pinterest.
အင်တာဗျူး - အင်တာဗျူးပုံစံကို သုံး၍ ကျွမ်းကျင်သူများထံမှတုံ့ပြန်မှုများကိုမျှဝေပါ။
ထူးဆန်းသော - စာဖတ်သူများနှင့်ထိတွေ့ရန်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ၊
အတိုကောက်အဘိဓါန် - လမ်းညွှန်သို့မဟုတ်ဝေါဟာရတစ်ခုကိုရေးပါ (နှင့်၎င်းကိုနောက်ဆုံးအခြေအနေထားပါ။ )
အသံ၊ ဗီဒီယို၊ အစီရင်ခံစာများကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အဖြူရောင်စာရွက်များမျှဝေခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောအခြားအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွေးအခေါ်များကိုသင်မည်သို့စမ်းသပ်ခဲ့သနည်း။ မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်မျှဝေဖို့အခမဲ့ခံစားရ!
Tags: ဖြစ်ရပ်တခုဇယားရုပ်ပြ strips တွေအကြောင်းအရာစိတ်ကူးများအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစိတ်ကူးများအကြောင်းအရာစီးရီးအကြောင်းအရာအကြံပြုချက်များအတိုကောက်အဘိဓါန်လမ်းညွှန်အင်တာဗျူးPinterestစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းစီးရီးဝေစုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျတွစ်တာထူးဆန်းသော